श्रीमती संग सम्बन्ध छुटेपछि बखत बिस्टले गरे यस्तो निर्णय, यसरी जोगी बनेका बखत अब के गर्छन ? ( भिडियो सहित ) – NepalajaMedia
श्रीमती संग सम्बन्ध छुटेपछि बखत बिस्टले गरे यस्तो निर्णय, यसरी जोगी बनेका बखत अब के गर्छन ? ( भिडियो सहित )
March 11, 2021 364
काठमाण्डौ – केहि समय अघि भाइरल भयका बखत र प्रतिभाको जोडी लाइ धेरै दर्शकहरुले रुचाइराख्नुभयको थियो। हेर्दा होचो भयता पनि उमेरले १८ बर्ष कटिसकेका थिय बखत अनि प्रतिभा हेर्दा ठुलो देखीय पनि उमेर भने धेरै भयको थियन।
बिभिन्न भिडियोमा अभिनय गर्ने मौका पनि पाए बखत र प्रतिभाले। बिभिन्न मिडिया र दर्शकहरुले सहयोग गर्दै आयका थिय। कतिपय कुराहरु पारिवारिक भयता पनि बिभिन्न मिडियामा जोडिरहेका थिय प्रतिभा र बखत। उक्त नामले देश तथा विदेश सम्म खुशियाली छाउथ्यो।
काठमाण्डौमा बस्दै गर्दा कोठा भारा र खाने कुराहरु नहुदा दर्शकहरुको र मिडियाहरुको सहयोगले उक्त कस्टबाट उद्दार भय उक्त जोडी।तर आज उक्त जोडीको सम्बन्ध बिच्छेद भयको छ। उक्त खबरले सबै दर्शकहरुलाइ दुख तुल्याएको छ।
प्रतिभाले दिनहु दिन बखतलाई यातना दिने गरेको खुलायाका छन् प्रतिभाका श्रीमान बखाताले। सारा मिडिया सामु बिहे बन्धनमा बाधियाका उक्त जोडी आज छुटेको छ।
समय समयमा उक्त जोडीको रमाइला भिडियोहरु सार्बजनिक भईरहेका थिय। प्रतिभाले मलाई छोड्दिनु मा एक्लै बस्न चाहान्छु यदि छोडेनौ भने म जे पनि गर्छु भनेकी छन् भन्ने जानकारी बखतले बताए।
आफ्नो श्रीमतीको खुशीको लागि मैले प्रतिभालाई छोडेर काठमाण्डौ आय भनेर मिडियामा रोए बखत। धेरै दिन देखि प्रतिभाले बखतलाई यातना दिदै आयको बताए। आफु सानो भयको कारणले पनि होला भन्ने शंका गरेका छन् बखाताले। भाबुक हुदै प्रतिभालाई खुशी हुनु , अगाडिको जिन्दगि राम्रो बितोस भन्दै रोए।
Prevमहाशिवरात्रीको दिन भुलेर पनि नखानुहोस् यी चीजहरु नत्र अनिस्ट हुनेछ
सर्वाेच्च अदालतको फैसलाबाट रमाइरहेको ओली समूहलाई प्रचण्डकी छोरी गंगा दाहालको चेतावनी